"जैव शेष" (दही): उपयोगी गुणहरू, संरचना, प्रकार र मूल्यांकन
आज भन्दा अधिक लोकप्रिय Yogurts। वजन कम गर्न - को जठरांत्रिय पर्चा गतिविधि को normalization, र अरूको लागि - केही मानिसहरू राम्रो स्वाद, अन्य खातिर यो पिउन। "जैव शेष" - एक विशेष दही। यो केवल प्राकृतिक सामाग्री हुन्छन्। उहाँले उत्कृष्ट स्वाद विशेषताहरु छ र तपाईंको स्वास्थ्य को लागि धेरै उपयोगी छ।
यो उत्पादन के हो
एक देखि उत्पादन जो दही, - "जैव शेष" , मानकीकृत दूध बुल्गेरियन जीवाणुहरु - लैक्टिक एसिड जीवाणुहरु यसको विशेष किण्वन द्वारा। ठीक किनभने अन्तिम उत्पादनमा यो, त्यहाँ धेरै biologically सक्रिय पदार्थ, भिटामिन र खनिज छन्। तर पूरक को एक किसिम हाम्रो शरीर को स्वाद को लागि मात्र आनन्द हो। तिनीहरूले शरीर लागि कुनै राम्रो सहन छैन। तसर्थ, आदर्श "जैव शेष" - दही Kefir।
शरीर को लागि लाभ
डाक्टर डेयरी उत्पादन को लाभ को राम्ररी थाह छन्। पहिलो लालच pediatricians को आहार प्रवेश गर्न सल्लाह किन छ प्राकृतिक दही। तिनीहरूले व्यापक प्रयोग गरिन्छ छैन बाल्यकाल आहार तर पनि। यी उत्पादनहरु आन्द्रा मा putrefaction बाधित र प्राकृतिक microflora बलियो बनाउँछ। यो कुशल धन्यवाद, शरीर शुद्ध पार्छ प्रतिरक्षा प्रणाली र सुधार स्वास्थ्य बलियो बनाउँछ।
आफ्नो वजन हेर्दै छन् जो महिला, पक्कै पनि उत्पादन "जैव शेष" बारे थाह छ। दही - यो सधैं जीव गर्न क्यालोरी र लाभ मा कम छ। बजार मा एकदम विपरीत हो कि धेरै उत्पादन छन्। ठ्याक्कै यो ब्रान्ड यो मान्यता प्राप्त गरेको छ किन?
दही विपरीत "जैव शेष"
सबै को पहिले पिउने दही "जैव शेष" विशेष शहरी बासिन्दा लागि डिजाइन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। यसको संरचना साँच्चै अद्वितीय छ। Nutritionists मेनुमा यो उत्पादन कम्तिमा एक बोतल समावेश गर्न एक दैनिक आधार सुझाव दिन्छौं।
यी yoghurts lactobacilli LGG, जो चयापचय को normalization योगदान समावेश गर्दछ। यो शहर मा dwellers सबैभन्दा ग्रस्त जसले थियो। पर्यावरण समस्या, ताजा हावा को कमी, तनाव - यो सबै निकै हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली undermines। तर, दुर्भाग्य, हामी ध्यान यसलाई हामी निरन्तर दुख्यो सुरु गर्दा मात्र तिर्नुपर्छ। तर उचित पोषण - जीवन र एकता आफ्नो शरीर संग को एक स्वस्थ तरिका जग हो।
"जैव शेष" को उत्पादन
उत्पादन लाइन स्वादिष्ट दही र तपाईंलाई लागि हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन निश्चित हो जो बीच curds, एक नम्बर छ। उदाहरणका लागि, Kefir उत्पादन "जैव शेष"। दही क्यालोरी सामग्री उत्पादन को G छैन भन्दा बढी 40 किलो कैलोरी प्रति 100 को - यो आफ्नो आंकडा हेर्दै ती लागि सही खाजा छ। र तपाईं एक स्वादिष्ट र स्वस्थ मिठाई खोजिरहेको भने ध्यान नाजुक curds गर्न muesli संग तिर्नुपर्छ। तिनीहरूले पुरा दिन को लागि एक महान मुड र ऊर्जा दिन्छ।
उत्पादन को संरचना
के अप दही "जैव शेष" बनाउँछ हेरौँ। यो उत्पादन प्रयोग विज्ञापन, अर्थात् यो हाम्रो शरीर यसको प्रयोगबाट हुन्छ कि वास्तवमा द्वारा निर्धारित छैन। उत्पादन लाइन फरक excipients र स्वाद संग yoghurts समावेश छ। तिनीहरू सबै पुरा बनाइएका र दूध झिकिएको छन्। को संरचना स्थिरिकारी र flavorings, अम्लता नियामकहरु र चिनी पनि समावेश छ। साथै, गैर-बोसो ड्राई दूध र दूध प्रोटिन, दही स्टार्टर र प्रोबायोटिक संस्कृतिका। मात्र अपवाद fillers, शर्करा र अन्य additives समावेश गर्दैन Kefir उत्पादन, अर्थात् सबैभन्दा प्राकृतिक छ।
पोषक र ताप सामग्रीको सामग्री
हामीलाई अब विस्तार दही धेरै क्यालोरी "जैव शेष" कसरी जाँचौं। सरल जवाफ काम छैन: प्रत्येक उत्पादन संरचना मा अन्य फरक छ। हामी भने छन्, तिनीहरूको तथ्याङ्कले हेर्दै निम्ति सिद्ध, यो "Kefir" दही (1%) छ। यसलाई 1 G बोसो, प्रोटिन को3जी र कुल क्यालोरी 41 प्रति उत्पादन 100 G Kcal मा कार्बोहाइड्रेट5ग्राम समावेश गर्दछ। धेरै राम्रो प्रदर्शन। आफ्नो बच्चा कि उत्पादन किन्न प्रयास गर्नुहोस्।
हाम्रो लाइन मा अर्को प्राकृतिक दही 2% हुनेछ। यसलाई पहिले नै उत्पादन को G 60 किलो कैलोरी प्रति 100 समावेश गर्छ, तर तैपनि धेरै सन्तुलित छ। दही "अनाज" समावेश उत्पादन को G 76 किलो कैलोरी प्रति 100 - श्रृंखला यो श्रृंखला को सबै भन्दा उपयोगी उत्पादनहरु छ अर्को उपयोगी "जैव शेष" बन्द गर्छ। मात्र 1.5 ग्राम बोसो3जी प्रोटिन र 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को संरचना मा। त्यो बाद को सामग्री पनि उच्च, न्यून कुल छ, छ उत्पादन को क्यालोरी। फल स्वाद पनि अधिक क्यालोरी सबै अन्य उत्पादनहरू। यसैले, तिनीहरूले वजन चाहनेहरूलाई लागि धेरै उपयुक्त हो। औसत क्यालोरी - प्रति 100 ग्राम 90 किलो कैलोरी, wherein को कार्बोहाइड्रेट 15 G बोसो समावेश - 2.4, र प्रोटिन -3जी
मिति, स्वादिष्ट व्यवहार लागि विकल्प धेरै। तपाईं आफ्नो परिवारको प्रत्येक सदस्य को लागि उत्तम "जैव शेष" फेला पार्न पक्का छन्। "हरियो चिया र लेमन" प्रेमीहरूको तटस्थ स्वाद को लागि उपयुक्त छ। यसबाहेक, यस दही 77 किलो कैलोरी समावेश गर्दछ। एकै समयमा, "जैव शेष। अनाज ", 76 क्यालोरी छ" Bilberry-अनाज "- 78।
तर, सबै भन्दा स्वादिष्ट व्यवहार - यो "जैव शेष" डबल स्वाद छ। चेरी, स्ट्रबेरी, चेरी र स्ट्रबेरी, ऐंसेलु, एक किसिमको ऐसेलु, साधारण र खरबुजा, आरु र खूबानी र जामुन - तिनीहरूले उत्पादन को G छैन 92 भन्दा कम किलो कैलोरी प्रति 100 समावेश गर्दछ। तथापि, तपाईं एक आहार मा छैनन् भने, तपाईँ तिनीहरूलाई कम्तिमा एक प्रयास निश्चित गर्नुहोस्। तपाईं तेजस्वी पूर्ण-bodied स्वाद पाउनेछन्।
भिटामिन र खनिज सामग्री
किनभने उनीहरू ट्रेस तत्व को भारी मात्रा समावेश दही "जैव शेष" शरीर धेरै लाभदायक छन्। हामीलाई तिनीहरूलाई छोटकरीमा गरेर बतान गरौं। पोटासियम, 100 - - फस्फोरस दही प्रत्येक 100 ग्राम क्याल्सियम, 152 को 124 मिलीग्राम समावेश गर्नुहोस्। अरूलाई कम तत्व पहिल्याउन, तर तिनीहरूले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। कोबाल्ट, फलाम यो मोलाइबडेनियम, फ्लोरिन, क्रोमियम, सेलेनियम, मैंगनीज, तामा, आयोडिन, जस्ता, र सल्फर। तर सबै छ। दही "जैव शेष" भिटामिन को एक किसिम समावेश गर्दछ। यो पीपी, सी, ए, र लगभग सम्पूर्ण समूह बी
सबै हामी खाना उत्पादनहरु गुणस्तर र राज्य स्तर कसरी पालन जान्न चाहन्छु। यो परीक्षण खरिद बाहिर, उत्पादन एक प्रयोगशाला मा परीक्षण छ जो पछि लागि। एक दही "जैव शेष" के हो? लाभ र हानि मापदण्डहरु को एक नम्बर मा मूल्यांकन। पहिलो उत्पादन नमूना उपभोक्ता गर्न प्रस्तावित गरिएको थियो। सबै सहभागीहरू उत्कृष्ट स्वाद, सुखद अम्लता र फल देखिने कणहरु उल्लेख गरे। दही यो चुनौती सामना।
के प्रयोगशाला मा भने? पहिलो परीक्षण राम्रो प्रोटिन सामग्री पुष्टि गर्नुहोस्। यो निर्माता संकेत भन्दा पनि ठूलो बाहिर गरिएका लगभग4G / 100 ग्राम त्यो प्राकृतिक दूध बनाइएका दही छ। को संरचना एक thickening एजेन्ट छ जो एक स्टार्च, छ। तर, स्वाद र क्यालोरी सामग्री प्रभावित छैन। bifidobacteria र लैक्टिक एसिड को संख्या 25 पटक न्यूनतम नम्बर भन्दा बढी छ। कि घोषणा उत्पादन नाम "bioyoghurt" अनुरूप छ। तर रोग पैदा जीवाणुहरु र संरचना मा ढुसी लागेको Fungi त्यो छ, उत्पादन पूर्ण सुरक्षित छ, छैन पत्ता छ।
"जैव शेष" चयापचय normalizes, त्यसैले यसलाई शरीरको वजन नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिका लागि धेरै उपयोगी छ। तर, यो मामला मा यो सबै भन्दा राम्रो फल additives बिना Kefir दही चयन गर्न छ। यो उत्पादन उपयोगी गुण को एउटा ठूलो छ। यो पाचन र आंतों peristalsis सुधार शरीर शुद्ध पार्छ र उसलाई toxins देखि हटाउँदछ। तर, यो सबै राम्रो प्राकृतिक दही को अन्त छ। यसको प्रयोगले स्नायु प्रणाली आंत्र क्यान्सर को खतरा, छाला, कपाल र नङ सकारात्मक प्रभाव कम गर्न सके पनि लाभदायी छ। कि दही, सबै उपयोगी छ अपवाद बिना छ। 14 दिन देखि एक महिना गर्न - यो दायरा सबै उत्पादनहरु को तखता जीवन। यो दही भण्डार गर्न सकिन्छ जो अधिक लाभकारी bifidobacteria अधिकतम अवधि छ। तीन महिना वा बढी, त्यसपछि, तपाईं thickeners, स्थिरिकारी र परिरक्षकों puree अघि - प्याकेज लायक आफ्नो जीवन हो भने।
सबै डाक्टर डेयरी उत्पादन गर्ने जीव लागि धेरै उपयोगी हो कि सहमत हुनुहुन्छ। यो प्रत्यक्ष bifidobacteria संग दही को विशेष गरी साँचो हो। नियमित रूपमा आहार मा शुरू, यस्तो उत्पादन, तपाईं शरीर घडी जस्तै काम गर्नेछ भनेर पक्का हुन सक्छौं। र परिणाम ठूलो भावना र राम्रो मुड हुनेछ। "जैव शेष" - विशेषज्ञहरूका अनुसार रूसी बजार यसको वर्ग को सबै भन्दा राम्रो प्रतिनिधि हो। स्वादिष्ट र स्वस्थ, यो प्रत्येक तालिका हुनुपर्छ।
भविष्यको लागि रहस्य तरकारी खाली। कसरी तहखाने मा बन्दागोभी भण्डारण गर्न?
हामी कुठरा बढ्न। यो के हो?
तालिका कसरी सजाउनु गर्न? घर भोजको लागि सरल नियमहरू
Albumin घरेलु पनिर: को ताप सामग्री, संरचना, शरीर लाभ र हानि
ड्राई खमीर को एक चम्मच मा कति ग्राम बारेमा विवरण
मिति: उपयोगी गुण र contraindications। सुकेको मिति को उपयोगी गुणहरू
मो वोरोनिश संस्थान: इतिहास, आधारभूत जानकारी
डेस्कटपमा लेबल छुटेको
Sura नदी - को वोल्गा को "सानो बहिनी"
पढ्न भन्दा लोकप्रिय पुस्तकहरू: सूची
अष्ट्रेलियाली राहत। को अष्ट्रेलियन राहत को मुख्य प्रकारका
किन नोवोसिबिर्स्क नोवोसिबिर्स्क कल? शहर को नाम को इतिहास र मूल
आधुनिक भित्री कोठा
कसरी लेख्न: हेर्न वा देख्न? क्रिया conjugation सबै
महिला बंध्यकरण: को 'को लागि' र 'विरुद्ध' सबै
Heterotrophic - यो शरीर को लागि हो?
दबाइ "पुखराज": प्रयोग, सुझाव र चाल लागि निर्देशन